Tontosa ny « Lazon’ady »: liana ireo zandry… Vina ny hanohy ny hetsika | NewsMada
Tontosa ny « Lazon’ady »: liana ireo zandry… Vina ny hanohy ny hetsika
Notontosaina, ny farany herinandro teo, ny antsan-tononkalo nampitondraina ny lohateny « Lazon’ady ». Tonga maro ny mpijery. Nirindra tsara ny teny an-tsehatra. Nanana ny nambarany ny mpanoratra…
Iray amin’ireo niantsa tononkalo, sady tompon’ny sanganasa nantsaina, rahateo i Gazela Meva. « Namaly ny antso tokoa ny mpitia zavakanto. Raha ny tazanay teny an-tsehatra, nahaliana ireo zandry mpanoratra tokoa ny « Lazon’ady », notontosaina tao amin’ny CGM Analakely ny asabotsy teo… Noho izy naka endrika « kalon’ny fahiny » angamba, raha izay ny azo ilazana azy. Mpanoratra efa somary zokinjokiny ihany mantsy izahay efatra mianadahy », hoy izy. Raha ny fanazavan’i Gazela Meva hatrany, tsikaritra ho nifantoka tsara tamin’ireo antsa tononkalo, ny fihetsika sy fomba fiantsa, sns, ireto tanora tonga maro ireto. « Toraka izany koa ny mpijery », hoy izy.
Anisan’ny nahatazanana izay fahalianan’ireo tanora mpanoratra ireo sy ny mpijery tonga maro teny an-toerana ihany koa ny teo amin’ny fotoana niresahana tamin’i Gazela Meva, i Tsitohery, i Riso Lalason ary i Aro. « Anisan’ny nanongilan-tsofina fatratra izy ireo raha namaly ny fanontaniana : « Nisy fiovana teo amin’ny tara-kevitry ny sanganasanareo ve ilay vanim-potoana lavalava tsy nahatazanana anareo sy ny lalana nizoranareo nandritra io fotoana io » ? », hoy i Gazela Meva.
« Tamin’ny ankapobeny, eny ny valin-teninay », hoy i Riso Lalason. Nohazavainy fa raha mbola tao anatin’ny hatanorana tanteraka no nanoratra, « tazana ao anatin’ny asa soratray ny endrika fitiavana mivaivay. Fitiavan’olon-droa lahy sy vavy. Fitiavan-tanindrazana miredareda, sns ». Rehefa tonga eo amin’ny fananana tokantrano sy taranaka indray, « taratra tao anatin’ny sanganasanay ny momba ny zanaka, ny fitaizana, sns », hoy i Riso Lalason.
Raha ny faniriana sy ny vina, hotohizanay iny « Lazon’ady » iny… Ho hita eo ihany ny tohiny », hoy i Gazela Meva.